FMBM / Application FI. A. FI – FJKM
FIKAMBANANA MAMPIELY BAIBOLY MALAGASY,
VITA NY “APPLICATION FI.A.FI.”AMIN’NY ANDROÏD
Fifaliana ho an’ny FMBM “Fikambanan’ny Mampiely Baiboly Malagasy” no manolotra fitaovana iray ho entina mitory ny filazantsara ,indrindra fa ho an’ireo izay tsy mahay mamaky teny sy manoratra. Tetikasa antsoina hoe “FInoana Azo avy amin’ny FIhainoana (FI.A.FI)”. Ny FI.A.FI. dia efa nisy teo anivon’ny FMBM nandritra ny taona maro.
Tamin’ny zoma 28 septambra 2018 lasa teo, teny amin’ny foiben-toerana teny Ampasampito no nampahafantarina ny vahoaka Kristiana rehetra ny fahavitan’ny “APPLICATION FI.A.FI”.
Araka izany dia endrika vaovao indray no isitrahan’ny rehetra ny FI.A.FI. manomboka izao. Azo alaina mivantana eny amin’ny foiben-toeran’ny FMBM eny Ampasampito io fitaovana vaovao io. Zaraina maimaimpoana, tsy misy vola aloha. Marihina fa ny Testamenta Vaovao ihany aloha hatreto no vita ka amin’ny Dikanteny Iombonana eto Madagasikara “DIEM” izany. Noho ny fivoaran’ny teknolojia izay hita fa tsy azo ferana intsony no antony iray lehibe nanaovana izao ezaka izao sady tsapa rahateo koa fa mora ny manaparitaka ny Tenin’Andriamanitra amin’ny alalan’ny « internet ».
Ny fiaraha-miasa takiana amintsika rehetra araka izany dia ny fanapariahana io “APPLICATION” io amin’ireo tapaka sy ny namana rehetra ho fanitarana ny tenin’Andriamanitra. 155 Mo no lanjany ary ny “Smart Phone” no mahazaka azy. Tsotra sady mora ampiasaina izy ity satria sady miaraka ny feo sy ny soratra izay vakianao.
Ankoatra io “Application” io, dia misy ihany koa ilay fitaovana iray antsoina hoe: “PROCLAIMEUR”. Mitovy amin’ny radio ny endriny. Mirakitra ny Tenin’Andriamanitra ao amin’ny Testamenta Vaovao manontolo ity fitaovana ity. Ny Baiboly Protestanta sy ny Baiboly Katolika ary ny DIEM dia hita ao avokoa. Misy ihany koa ny dikanteny amin’ny fiteny Anglisy sy Frantsay. Ny mampiavaka azy indray dia mandeha amin’ny herin’ny masoandro, afaka fahanana amin’ny “courant eléctrique” ary ny fahatelo dia afaka fahanana amin’ny “Manivel” na ahodina tànana.
Raha liana amin’io tetikasa io indray ianao dia afaka manatona eny an-toerana. Maimaimpoana avokoa ireo fitaovana ireo, miaraka amin’ny fampiofanana atolotra anao. Izany tokoa ny hoe “Ny Tenin’Andriamanitra tsy mba voafatotra” ary mivoatra manaraka ny toetrandro. Moa ve ny fiainantsika mivoatra manaraka ny tenin’Andriamanitra ?
Santatra Fahazavana AFIFAB